Community – Burmese Community Development Collaboration (BCDC)
20/12/2021 Author: BCDC Category: Community
တော်လှန်​ရေးရဲ​ဘော်​လေး​တွေ့ခဲ့တဲ့ PRF Members Program ပြည်သူ့​တော်လှန်​ရေးမိသားစုအစီအစဥ်ကြီးကို ​ခြေလှမ်းညီညီစတင်​နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။PRF Member အဖြစ်ပါဝင်လိုသူများအနေနဲ့ win.swe@bcdc.org.au ထံတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါဝင်နိုင်ပါပြီ။ ပြည်သူ့တော်လှန်ရေး မုချ အောင်ရမည်။ Details about PRF Programme “အောင်ပွဲဆီသို့ ခြေလှမ်းညီစို့” ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်ကိုကိုင်စွဲလို့ နွေဦးတော်လှန်ရေးကြီး အဆုံးသတ်အောင်ပွဲပြီးဆုံးသည်အထိ တိုက်ပွဲဝင်သူရဲကောင်းတွေကို လစဥ်လတိုင်း ထောက်ပံ့ဖြည့်ဆည်းပေးမယ့် ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးမိသားစုအစီအစဥ်မှာ စတင်ပါဝင်ကူညီထောက်ပံ့နိုင်ကြပြီဖြစ်လို့ အစီအစဥ်အသေးစိတ်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးမိသားစု PRF Member ဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုလျှောက်ရမလဲ ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိတဲ့ OFP Official Fundraiser တွေကနေတဆင့် လျှောက်ထားသူ၏ အမည် (Name or Nickname) နှင့် Email address များ ပေးပို့လှူဒါန်းရမှာပါ။ PRF…
21/11/2021 Author: BCDC Category: Community
အမ်အိုဒီကစီစဉ်တဲ့ ၅သန်းraffle tickets ရဲ့နောက်ဆက်တွဲလစဉ်ကြေးစကောက်မဲ့အစီအစဉ်ကို ရက်ပိုင်းအတွင်းစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ မန်ဘာတွေကို နှုတ်ခမ်းနီ (၅၀)၊ နာနတ်သီး (၁၀၀)၊ ထီး (၅၀၀)၊ပြောင်းဖူး (၁၀၀၀)၊ ဖီးနှစ်ငှက် (၅၀၀၀)ဆိုပြီး ၅ဆင့်ရှိပြီးတတ်နိင်တဲ့အဆင့်ကိုလတိုင်းလှူပေးဘို့ပါ။ ပိုက်ဆံက ယူအက်ဒေါ်လာပါ။ တကမ္ဘာလုံးအတွက် မန်ဘာဦးရေ ၅သိန်းသတ်မှတ်ထားတာမို့ chat box ထဲကြိုတင်စာရင်းပေးထားလို့ရပါပြီ။ မြန်မာပြည်ကသူတွေမန်ဘာဝင်ချင်ရင်လဲအစီစဉ်ပေးပါမယ်။ စပြီးဆက်သွယ်လို့ရပြီနော်။
23/09/2021 Author: BCDC Category: Community
မင်္ဂလာပါ…… NUG အစိုးရ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ လိုအပ်ချက်များကို ကူညီဖြည့်ဆည်းရန် စီစဥ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ #5 Million Challenge Campaign မှာ အလှူရှင်များအဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ပါဝင်လှူဒါန်းနိုင်ရန်အတွက် Raffle Ticket (3812) စောင် ကူညီရောင်းချပေးသေ Burmese Community Development Collaboration (BCDC) အဖွဲ့ အား OFP ဝိုင်းတော်သားများမှ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားရင်း ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရည်မွန်ထံမှ အသိအမှတ်ပြုကျေးဇူးတင်လွှာအား ပူးတွဲပေးပို့အပ်ပါတယ်.. မြန်မာနိုင်ငံစစ်ကျွန်ဘဝကလွတ်မြောက်သည်အထိ ကြိုးပမ်းအားထုတ်ကြဖို့ ရည်ရွယ်ထားသည်နှင့်အညီ ပေါ်ပေါက်လာသောလိုအပ်ချက်တိုင်းကို ကူညီဖြေရှင်းကြဖို့ နောက်ထပ်ပြုလုပ်လာဦးမယ့် Campaign များမှာလဲ ယခုလိုပဲ အတူတကွ အင်တိုက်အားတိုက်ကြိုးပမ်းအကောင်အထည်ဖော်ကြဖို့ အားပေးတိုက်တွန်းပါရစေ..အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။
5 Million Challenge Raffle Ticket Sale
12/08/2021 Author: BCDC Category: Community
5 Million Challenge Campaign က raffle tickets များဝယ်ယူအားပေးလိုသူများ ၂၈ ရက်နေ့ ည ၁၂ နာရီမှာ အရောင်းပိတ်တော့မှာဖြစ်လို့ အောက်ပါလင့်ကိုသွားပြီးဝယ်ယူနိင်ပါတယ်။ CRPH raffle tickets များကို အောက်ပါလင့်တွေသွား၍ စတင်ဝယ်ယူနိင်ပါပြီ။ TICKET SELLING CLOSE at 28 August Midnight (Sydney Time). မဲဖောက်မည့် ပစ္စည်းတွေကတော့ Lelf – ကိုမင်းကိုနိင်ရဲ့ နွေဦး လို့အမည်ပေးထားတဲ့ ပန်းချီကား Central – ကိုကျားပေါက်ရဲ့ Your days will come ပန်းချီကား Right – ရုပ်ရှင်နဲ့ပန်းချီဆရာကြီး ဦဝင်းဖေရဲ့…
19/07/2021 Author: BCDC Category: Community
12/07/2021 Author: BCDC Category: Community
For direct bank transfer:- Bank Name: Westpac Bank Account Name: Burmese Community Development Collaboration Covid Donation with PayPal BSB: 032-078 Account number: 760591 SWIFT code: WPACAU2S for overseas. Ref: DonationForCovid19. Covid Donation with QR Code Contacts: U Maung Maung Myint 0437 470 464 Nila Wai Toe 0430 051 070 Judy…
08/05/2021 Author: BCDC Category: Community
CRPH-NUG donation amount AU $ 78543 has been received as of 12 July 2021. Thank you for your generous donation. မြန်မာပြည်မှာ စစ်အာဏာရှင် ပြုတ်ကျ ​ဘို​ CDM လုပ်နေကြတဲ့ ဝန်ထမ်းများကို့ ယနေ့အထိ ကျွန်တော် တို့နဲ့ အတူပါဝင် လှူဒါန်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့ သူများကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် စစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေး အရှိန်မြင့်လာတာနဲ့အမျှ CDM လုပ်နေကြတဲ့ ဝန်ထမ်း အတွက် ထောက်ပံပေး ရန်လိုအပ်တာတွေကလည်း ပိုမိုလိုများပြားလာပါတယ် အခုကျွန်တော်တို့ ဟာ CRPH နဲ့ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်လာနိုင်တဲ့ အတွက် လှူဒါန်းသူတွေများလာသလို…
05/05/2021 Author: BCDC Category: Community
CRPH မှ Gofundme နဲ့ အလှူငွေကောက်ခံရာတွင် အများသိကြသည့်အတိုင်း အခက်အခဲများစွာရှိသဖြင့် country’s CRPH fundraiser model ဖြင့်ပြောင်းလဲလိုက်ပါသည်။ BCDC အဖွဲ့မှ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့မှ မေလ ၄ ရက်အထိ CDM အတွက် ကောက်ခံရရှိပြီး မြန်မာပြည်သို့ စုစုပေါင်း ၁၄၀၀ သိန်း ကျော်ပေးပို့လှူဒါန်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ BCDC non-profit organization အနေဖြင့် CRPH international relations နှင့်ဆက်သွယ်၍ မှတ်ပုံတင်ထားပါသောကြောင့် CRPH ကိုလှူချင်သူများ Gofundme တွင်သွားရောက်လှူဒါန်းစရာမလိုတော့ဘဲ BCDC Trust အကောင့်တွင်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိင်အောင်စီစဉ်ထားပါသည်။ CRPH အတွက် BCDC မှတဆင့်လှူဒါန်းလိုသူများ Mobile banking…
04/05/2021 Author: BCDC Category: Community
CRPH မှ Gofundme နဲ့ အလှူငွေကောက်ခံရာတွင် အများသိကြသည့်အတိုင်း အခက်အခဲများစွာရှိသဖြင့် country’s CRPH fundraiser model ဖြင့်ပြောင်းလဲလိုက်ပါသည်။ BCDC အဖွဲ့မှ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့မှ ဧပြီ ၂၀ ရက်အထိ CDM အတွက် ဒေါ်လာ ၁၂၀,၀၀၀ ကျော် ကောက်ခံရရှိပြီး မြန်မာပြည်သို့ စုစုပေါင်း ၁၂၂၄ သိန်း ပေးပို့လှူဒါန်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ http://bcdcaustralia.org.au/bcdc-cdm-trust-fund-info-and…/ BCDC non-profit organization အနေဖြင့် CRPH international relations နှင့်ဆက်သွယ်၍ မှတ်ပုံတင်ထားပါသောကြောင့် CRPH ကိုလှူချင်သူများ Gofundme တွင်သွားရောက်လှူဒါန်းစရာမလိုတော့ဘဲ BCDC Trust အကောင့်တွင်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိင်အောင်စီစဉ်ထားပါသည်။ CRPH အတွက်…
15/04/2021 Author: BCDC Category: Community
လက်ရှိအခြေအနေတွင် CDM ပါဝင်သူများကိုထောက်ပံ့ပေးရန်ပိုမိုလိုအပ်လာသလို CDM fund အတွက်လှူသည့်အရေအတွက်နဲလာပါသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးများများရှယ်ပေးကြပါ။ ကျွန်တော်တို့ Action Against Military Coup (Sydney) CDM Fundraising အဖွဲ့က ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်နေ့မှစတင်ကောက်ခံခဲ့ရာ ယနေ့အထိ (20 April 2021) အောက်ဖော်ပြပါ နေရာများသို့ ၁၂၂၆ သိန်း ပေးပို့လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ================================. (၁) ရန်ကုန်မြို့တွင် CDM ပါဝင်နေသူများကို ကူညီနေသည့် အဖွဲ့အစည်း တခုအား သိန်း ၅၀၊ (၂) ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းရှိ နယ်မြို့နယ်တခုတွင် CDM တွင် ပါဝင်နေကြသော ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး နှင့် စည်ပင်ဝန်ထမ်းများအား သိန်း ၅၀၊ (၃) ချင်းပြည်နယ် ရှိ မြို့နယ်တခုတွင် CDM တွင် ပါဝင် နေကြသော ဝန်ထမ်းများ အတွက် သိန်း ၅၀၊ (၄) ရန်ကုန်မြို့တွင် CDM ပါဝင်နေသူများကို ကူညီနေသည့် အဖွဲ့အစည်းမှ တဆင့် ကယားပြည်နယ်တွင် CDM ပါဝင်နေသော ဝန်ထမ်းများကို သိန်း ၅၀၊ (၅) ရန်ကုန်မြိုတွင်းရှိ မြို့နယ်တခုတွင် CDM ပါဝင်နေသော ဝန်ထမ်းများ ၂၅၀ ကို ဆန်၊ ဆီ ဆား ရက်သတ္တပတ် ၂ပတ်စာ ၂၅ သိန်း၊ (၆) မွန်ပြည်နယ် ဌာနဆိုင်ရာတခုမှ CDM လုပ်နေသောဝန်ထမ်းများအတွက် သိန်း ၂၀၊ (၇) ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းရှိ တက္ကသိုလ် တခုတွင် CDM ပါဝင်နေသော ဝန်ထမ်းများအတွက် သိန်း ၂၀၊ (၈) နေပြည်တော်တွင် အောင်မြင်သော CDM ကို လုပ်ဆောင်နေသည့် ဝန်ကြီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများအတွက် သိန်း၅၀၊ (၉) ရန်ကုန်မြို့ရှိ NGO ပရဟိတ အဖွဲ့အစည်းမှတဆင့် CDM လုပ်နေသူများအား ဆန်၊ ဆီ ဆား ထောက်ပံ့ရေးအတွက် ၅၁ သိန်း၊ (၁၀) မကွေးတိုင်း နှင့် ချင်းပြည်နယ် ကြားတွင် ရှိသော မြိုနယ် တခုတွင် CDM ပါဝင်နေသော ဝန်ထမ်း များအားသိန်း ၃၀၊ (၁၁) မွန်ပြည်နယ် မြို့တမြို့ရှိအစိုးရဌာနတခုတွင် CDM လုပ်နေ‌သော ဝန်ထမ်းများကို သိန်း ၂၀၊ (၁၂) မွန်ပြည်နယ် မြို့နယ်တခုအတွင်းရှိ အစိုးရဌာနနှစ်ခုတွင် CDM လုပ်နေသော ဝန်ထမ်းများကို သိန်း ၃၀၊ (၁၃) ပဲခူးတိုင်းအတွင်းရှိ မြိုနယ်တခုတွင် CDM တွင် ပါဝင်နေသော ဝန်ထမ်းများကို ၂၅ သိန်း၊ (၁၄) ရန်ကုန်၊ မန္တလေး စစ်ကိုင်း မြိုနယ်အတွင်းရှိ ဝန်ကြီးဌာနာများတွင် ပါဝင်နေသော ဝန်ထမ်းများကို သိန်း ၃၀၊ (၁၅) ရန်ကုန်မြို့တော်အစိုးရရုံးကြီးတခုမှ CDM တွင်ပါဝင်နေသော ဝန်ထမ်းများကို သိန်း ၅၀၊ (၁၆) စစ်ကိုင်းတိုင်း မုံရွာမြို့အစိုးရရုံးတခုမှ CDM တွင်ပါဝင်နေသော ဝန်ထမ်းများကို သိန်း ၂၀၊ (၁၇) နေပြည်တော် CDM အဖွဲ့မှတဆင့် အစိုးရဌာနများမှ CDM တွင်ပါဝင်နေသော ဝန်ထမ်းများကို သိန်း ၃၀၊ (၁၈) မကွေးတိုင်း မြို့တမြို့ရှိအစိုးရဌာန ၂ခုမှ CDM တွင်ပါဝင်နေသောသူများကို ၃၅ သိနိး၊ (၁၉) မကွေးတိုင်း အစိုးရဌာန တခုမှ CDM တွင်ပါဝင်နေသောသူများကို သိန်း ၃၀၊ (၂၀) စစ်ကိုင်း နှင့် မြစ်ကြီးနား ရှိဝန်ကြီးဌာနများတွင် ပါဝင်နေသော ဝန်ထမ်းများကို သိနိး ၃၀၊ (၂၁) ပဲခူးတိုင်း ဌာနပေါင်းစုံ မှCDM လုပ်နေသူများအတွက် သိန်း ၃၀၊ (၂၂) ရန်ကုန်တိုင်းရှိ ဆန္ဒပြသူများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများအတွက် ၁၅ သိန်း၊ (၂၃) ဧရာဝတီတိုင်းရှိမြို့တမြို့ရှိ ဌာနပေါင်းစုံမှCDM လုပ်နေသူများအတွက် ၄၆ သိန်း၊ (၂၄) ရန်ကုန်မြို့အနီးရှိ ဌာနတခုမှ CDM လုပ်နေသူများအတွက် ၂၅ သိန်း၊ (၂၅) မန္တလေးမြို့အနီးရှိ အရေးပါသောအစိုးရဌာနကြီးတခုမှ CDM တွင်ပါဝင်နေသောသူများအတွက် သိန်း ၅၀၊ (၂၆) ကချင်ပြည်နယ်မြို့တမြို့မှ ဆန္ဒပြ၍ပြေးလွှားပုန်းရှောင်နေရပြီးနေရေးထိုင်ရေးစားရေးသောက်ရေးအခက်အခဲရှိသူများ အတွက် ၁၀ သိန်း၊ (၂၇) မန္တလေးအနီးရှိမြို့တမြို့မှ ဌာနဆိုင်ရာတခုတွင် CDM လုပ်နေကြသူများအတွက် ၃၆ သိန်း၊ (၂၈) ရန်ကုန်မြို့အတွင်း အကြမ်းဖက်ကောင်စီ၏ ပစ်ခတ်မှု့ကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများအတွက်လိုအပ်သောဆေးကုသရန်အတွက် ၁၀ သိန်း၊ (၂၉) ရန်ကုန်မြို့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတခုမှ CDM လုပ်နေ၍ လစာမရရှိသောသူများအတွက် ထောက်ပံ့ငွေ ၁၅.၅သိန်း၊ (၃၀) မကွေးတိုင်း အစိုးရဌာနကြီးတခုမှ CDM လုပ်နေသူများအလုပ်ပြန်ဆင်းရန်အတင်းအကြပ်ဖိအားပေးခံရသူများအတွက် ၃၇.၅ သိန်း၊ (၃၁)ရန်ကုန်မြို့အတွင်း အကြမ်းဖက်ကောင်စီ၏လက်ချက်ဖြင့် ဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်ခံထားရသောသူများဆေးကုသရန် သိန်း၃၀၊ (၃၂) ကရင်ပြည်နယ် မြို့တမြို့မှ ဌာနဆိုင်ရာတခုတွင် CDM လုပ်နေသူများအတွက် သိန်း ၄၀၊ (၃၃) ရန်ကုန်တိုင်းရှိ CDM လုပ်နေသော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ အတွက် သိန်း၃၀၊ (၃၄) စစ်ကိုင်းတိုင်း အစိုးရဝန်ကြီးဌာနတခုမှ CDM လုပ်နေသူများအတွက် ၂၅ သိန်း၊ (၃၅) မန္တလေးရှိအရေးပါသော အစိုးရဌာနကြီးတခုတွင် CDM လုပ်နေသောသူများအတွက် သိန်း ၅၀၊ (၃၆) ရန်ကုန်မြို့ရှိ အစိုးရဌာနတခုမှ CDM လုပ်နေသော သူများအတွက် ၂၈သိန်း (၃၇) ကယားပြည်နယ်မှ CDM ဝင်၍ပုန်းရှောင်နေရသူများကိုလက်ခံစောင့်ရှောက်ထားသောအဖွဲ့ကိုသိိန်း ၂၀၊ (၃၈) ပြည်နယ်မြို့တမြို့မှကျဆုံးသွားသောအာဇာနည်များကိုရည်စူး၍ ၃၂သိန်း ၊ စုစုပေါင်း ၁၂၂၆ သိန်း ကိုလှူဒါန်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ …